Global Voices teny Malagasy · 15 Aogositra 2015
15 Aogositra 2015
Tantara tamin'ny 15 Aogositra 2015
Japana: Dokambarotra Mahazendana Anaty TV, Mahasarika Mpijery Maro
Azia Atsinanana15 Aogositra 2015
Miparitaka be ao Japana ny dokambarotra iray mahazendana miresaka lalao baseball.
India : Tsy Ny Ara-Pahasalamana Ihany No Voakasiky Ny Tsy Fisian'ny Trano Fivoahana
Azia Atsimo15 Aogositra 2015
Mitarika ny sotasota ara-nofo atao amin'ireo tovovavy sy ny vehivavy ny fangerena an-kalamanjana, ary ireo fitaovan'ny rafi-panavakavahan-tsaranga ao amin'ny firenena dia 'ny tsy fikitika' no natao hanadio ireo maloto any amin'ny faritra sasany, amin'ny alàlan'ny tànana.
Raha jerena ny tsy fifankahazoana hatry ny ela eo amin'i Shina sy Japana tamin'ny heloka bevava momba ny ady nataon’ny Japoney nandritra ny Ady Lehibe faha-II ary koa ny disadisa ara-jeopolitika tany Azia, maro ny Shinoa no tsy nandray ny vaovao ho tsara.
Manakombona ny Vavany amin‘ny “Scotch” Ny Mpiangaly Mozika An’Arabe Ao Maosko Mba Hanoherana Ny Famoretana Ataon’ny Polisy
Eoropa Afovoany & Atsinanana15 Aogositra 2015
Ny mpiangaly mozika an’arabe ao Maosko maneho fanoherana amin’izay lazainy ho fanagadràna tsy ara-dalàna ataon’ny polisy sy ny sazy ara-bola mihoa-pampana manitsakitsaka ny zony sy ny fahalalahany ara-javakanto.
Manery Ny Governemanta Hanasazy Ny Uber Ireo Mpamily Taxi Ao Hong Kong
Manery ny governemanta mba hanasazy ireo tolotra mpanofa fiara tsy manana fahazoan-dalana tahaka ny Uber sy ny GoGo Van ireo mpamily taxi. Saingy milaza ny mpanjifa fa ahitana tombotsoa maro ny fahafahana mifidy tolotra fanofana fiara.
Ireo Nizeriana Miverina Any Amin'ny Lisea Miaraka Amin'ireo Bitsika Mahatsikaiky An'arivony
Afrika Mainty15 Aogositra 2015
Manana laza ho 'misakafo tsara' ireo mpiandraikitra ny trano fisakafoana any amin'ireo lisea Nizeriana, miaraka amin'ny fahazaran-dratsy 'mivarotra' ny sakafo tokony ho an'ireo mpianatra sasany.
Afaka Miresaka Ny Fiovàn'ny Politika Momba Ny Fako Ao Libanona Ve?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana15 Aogositra 2015
Misy hetsika ara-politika miforona miaraka manodidina ny tsy fankasitrahan'ireo olom-pirenena Libane ny fomba fanao tsy mendrika ataon'ny governemantany amin'ny fanariana ny fako.
Tsy Ireo Vondrona Mpikirakira Rongony Intsony No Loza Lehibe Indrindra Mitatao Ho An'ireo Meksikana Mpanao Gazety
Amerika Latina15 Aogositra 2015
Ankehitriny, ireo tomponandraiki-panjakana sy polisy no ahiahiana ho nanao ny ankamaroan'ireo fanafihana mpanao gazety.
Japoney Mpanao Zavakanto, Manao Asa Mahavariana Mampiseho Ny Fiainana Isan'andro Amin'ny Alalan'ny Broccoli, Fitazonana Taratasy Sy Singa Elektronika
Manao fanehoana ny fiainana amin'ny hakelezany mahafinaritra, amin'ireo fitaovana fampiasa isanandro ny Japoney iray mpanao zavakanto, ary nahazo mpanjohy maro tokoa ao amin'ny Instagram.